प्रधानमन्त्रीले चार घण्टासम्म सुने विज्ञका कुरा, के होला अबको कदम ? - Vishwa News
प्रधानमन्त्रीले चार घण्टासम्म सुने विज्ञका कुरा, के होला अबको कदम ?
August 4, 2020 ० बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । अझ चिन्ताको विषय त कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । किनकी शुरुवाती दिनमा भारत र विदेशबाट फर्किएका नेपालीमा मात्र कोरोना थियो । उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्दा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना थिएन । तर, भारतबाट लुकिछिपी पस्ने र नेपाल आइसकेपछि पनि क्वारेन्टिनमा नबस्दा अब शहरी क्षेत्र र तराई भेगमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलने क्रममा रहेको छ ।
लामो समय पार्टी विवादमा अल्झिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार भने कोरोना भाइरसको महामारीका सम्बन्धमा चासो राखे । उनले आज वालुवाटारमा विज्ञहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । उनले आज स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सँगसँगै लैजान सकिने सम्भावनाका विषयमा विज्ञहरुसँग राय लिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको सोच केही समय पुनः लकडाउनमा जाने रहेको छ । तर, केही विज्ञले भने अब अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता नगर्न समेत सुझाव दिएको वालुवाटार स्रोतको भनाई छ । आज प्रधानमन्त्री विज्ञहरुसँगै करीव ४ घण्टा गन्थन मन्थनमा सहभागी भए । आज उनले छलफलमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि बोलाएका थिए ।
धेरैले आजको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती केही परिपक्क देखिएको बताएका छन् । किनकी यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाउने अधिकांश बैठकमा आफै बढी बोल्ने र अप्रमाणिक विषय बोलेर बढी आलोचित हुने गरेका थिए । यसअघि उनले गत जेठमा राखेको यस्तै बैठकमा बेसार खाएर कोरोना ठिक हुने देखि नेपालीले कोरोनालाई सजिलै पचाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मंगलबारको बैठकमा भने उनले विज्ञका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको बैठकमा सहभागी एक अर्थशास्त्रीले जानकारी दिए । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि राखिएको थियो । बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि निम्ता थियो । तर, उनी अर्कै छलफलमा व्यस्त भएको बताइएको छ । विज्ञसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री अब कस्तो कदम चाल्दैछन्, त्यो भने आज बैठकमा सहभागी कसैले पनि अनुमान लगाउन भने सकेनन् ।
उपत्यकामा अत्यावश्यक वस्तुको किनमेल ९ बजेसम्म गर्न पाइने
अमेरिकी तल्लाे सदनले पास गर्यो न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १५ डलर, रिपब्लिकनहरु विपक्षमा
नेपालमा श्रम तथा रोजगार सम्मेलन हुँदै
लगातार तेस्रो खेलमा पनि टीममा परेनन् सन्दीप, दिल्ली पराजित
रसियाबाट साढे २ करोड खोप नेपाल आउने खबरले तातियो विश्वबजार